मध्य भोटेकोशीको आईपिओमा कति पर्यो आवेदन? - जन आवाज
मध्य भोटेकोशीको आईपिओमा कति पर्यो आवेदन?
मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीले निष्काशन गरेको आईपिओमा आज ७० लाख बढीको आवेदन परेको छ । कम्पनीको आईपिओमा २८१ जना आवेदकबाट ७० हजार २ सय ६० कित्ताको लागि आवेदन परेको बिक्रि प्रब्द्न्हक ग्लोबल आईएमई क्यापिटलले जनाएको छ । कम्पनीको यस अघि स्थगन भएको आईपिओ बिक्रि आज साउन ५ गतेबाट पुन: सुचारु भएको हो ।
कम्पनीले बैशाख २१ गतेदेखि सिन्धुपाल्चोकका आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई आईपिओ निष्काशन गरेकोमा निषेधाज्ञाको कारण बैशाख २४ गते बाट नै स्थगित भएको थियो । यस आईपिओमा छिटोमा साउन १७ गते र सो अवधिसम्म पर्याप्त आवेदन नपरेमा ढिलो सुन ३२ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने छ ।
कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीयलाइ ६० करोड बराबरको ६० लाख कित्ता शेयर निष्काशन गरेको हो। कम्पनीले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका बासिन्दाको लागि कुल जारी पूँजी रु.६ अर्बको १०% अर्थात् रु.६० करोड बराबरको ६० लाख कित्ता निष्काशन गर्न लागेको हो।